Caruurta sharci la'aanta ah oo aan iskuulka alaga qaban doonin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruurta sharci la'aanta ah oo aan iskuulka alaga qaban doonin
La daabacay fredag 23 augusti 2013 kl 13.49
Maamulka booliska Rikspolisstyrelsen ayaa ku taliyey in lagu qoro xeer booliiska in booliska uusan geli karin iskuulada si ay u soo qabtaan caruurta sharci la'aanta dalka ku degan ee dalka laga masaafurinayo. Taladaan ayey mamulka doonayaan in lagu daro xataa in uusan booliiska qabanin marka caruurta iskuulada laga soo wadayo.
1 juli sannadkan ayaa xaquuq loo siiyey in caruurta sharci laanta ah in ay iskuulada dhigtaan halka dhanka kale la akeeyey howl-sha booliiska ee ah ka masaafurinta dalka dadyowga sharci la'aanta ah. Ururu badan ayaa horey u dalabadey in booliska laga maamnuuco in caruurta sharci la'aanta ah ka soo qabtaan iskuulka.
Laakiin barlamaanka ayaa sika diidey in maamnuucid noocaas ah lagu qoro sharciga dalka u degsan laakiin booliiska laftirkooda yaa doonaya in ay hada xeerka ayaga u yaala in ay ku daraan mamnuucidan. Sören Clerton waxuu madax u yahaye booliiska xad oo u xil-saaran masaafurinta dadka sharci la'aanta ah.
- marka laga hadlayo ka soo qabashada caruurta iskuulada waxaan xeerkeena ku qoreynaa talo ah in booliiska sidaas sameynin . Sidaas in yeelno waxaa u sabab ah sharciga dalka madiidana in caruurta iskuulada laga qabto anagana wax sharciga ogalyahey ma mamnuuci karno, laakiin talo ahaan baan xeererkeena ugu qori karnaa ayuu yeri.